China Omenala patch ebi akwụkwọ ekspootu na Product | Evergreen
Omenala patch ebi akwụkwọ
A omenala sublimated kwachie (ma ọ bụ na agba e biri ebi baajị) bụ a pụrụ iche usoro na oji virtual foto àgwà. The agba usoro enye gị omenala sublimated baajị-enweghị atụ zuru ezu na vibrant agba ma doo anya nke aghụghọ na-aga n'ihu-aj u. The ike visual àgwà nke ndị a patches bụ n'adịghị ihe ọ bụla ị na mgbe hụrụ. Gị ahịa, ndị ahịa ma ọ bụ òtù unu ga-mara ha na nke ahụ bụ ihe mbọn bụ ihe niile banyere. Ọ dịghị mkpa ịgụ na agba. Agba AR ...
A omenala sublimated kwachie (ma ọ bụ na agba e biri ebi baajị) bụ a pụrụ iche usoro na oji virtual foto àgwà. The agba usoro enye gị omenala sublimated baajị-enweghị atụ zuru ezu na vibrant agba ma doo anya nke aghụghọ na-aga n'ihu-aj u. The ike visual àgwà nke ndị a patches bụ n'adịghị ihe ọ bụla ị na mgbe hụrụ. Gị ahịa, ndị ahịa ma ọ bụ òtù unu ga-mara ha na nke ahụ bụ ihe mbọn bụ ihe niile banyere.
Ọ dịghị mkpa ịgụ na agba. Agba ndị na-enweghị atụ. Otu narị agba ndị otu ala price dị ka onye na agba. E nweghị ọzọ ebubo dabeere na mkpuchi. Site 10% ka 100% mkpuchi, gị patch bụ otu ala price.
Obibi-enye anyị ohere ime ụdị ihe ahụ agaghị ekwe omume na embroidery na kpara, dị ka aghụghọ nkọwa na-akparaghị ókè na agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ a vibrant Eserese-on-a-kwachie, ị naanị na-arịọ maka ebipụta, nke ka a elu mkpebi imewe. Evergreen Ọrụ Nhazi Obodo bụ mpako na-na-eduga ọkachamara emeputa nke patches nke sublimation ebi akwụkwọ jikọtara na embroidery nhazi.
Previous: Omenala kwachie maka ebi akwụkwọ
Next: Omenala sublimatin katuunu patches
Metal Baajị Obibi
Omenala kwachie maka ebi akwụkwọ
Sublimation ebi akwụkwọ crests
Ibi akwụkwọ ígwè-na patches
Omenala sublimation nnọchianya
Applique ebi akwụkwọ patches
nko na Loop kpara Baajị , Chenille Letter patches, Chenille Varsity Letter T Patch, Chenille Varsity Letter, tụrụ àgwà Baajị, Chenille Patch Letters, All Products- 粤ICP备18108880号-1